Warka suugaanta ee ku gaarsiinaya waji kale | Bezzia
Maria vazquez | 14/10/2021 12:00 | Wararka
Bishan waxaan ku dhex safreynaa afartaan suugaaneed ee suugaaneed ilaa xilli kale. Waxaan ku dhex marnaa Qorayaasha qarnigii XNUMXaad iyo XNUMXaad sida Louisa May Alcott, Anne Brontë ama Flora Thompson, iyo Anne Hébert iyo halyeeyadeeda dumarka ah. Diyaar ma u tahay inaad ku raaxaysato sheekooyinkaaga?
1 Furaha dahsoon iyo waxa furay
Furaha dahsoon iyo waxa furay
Qore: Louisa May Alcott
Waxaa tarjumay: Micaela Vázquez Lachaga
Jacaylku wuxuu u muuqdaa inuu xukumo gudaha hoyga dadka waaweyn Richard iyo Alice Trevlyn, oo ku yaal baadiyaha ingiriiska ee bucolic; Si kastaba ha ahaatee, booqashadii lama -filaanka ahayd ee qof qalaad iyo dhowr eray oo ay is -dhaafsadeen isaga iyo seygeeda, oo Alice si qarsoodi ah u maqasho, ayaa ah bilowga musiibo aan la macnayn karin oo weligeed beddeli doonta deggenaanshaha qoyska Trevlyn. Waa maxay warka xun ee booqdaha la yimid? Maxay Alice ugu dhacdaa xaalad daciifnimo jireed iyo maskaxeed oo aan xitaa yareyn karin jiritaanka ilmaheeda Lillian? Sidee muuqaalka, dhowr sano ka dib, Bawlos, oo ah nin dhallinyaro ah oo gala adeegga Lady Trevlyn iyo gabadheeda qaangaarka ah, ku yeelan doonaa waxaas oo dhan? Maxaase furi doona furaha dahsoon ee cinwaanka u siinaya sheekadan gaaban ee xiisaha leh?
Waxaa ka buuxa shaki bogga ugu dambeeya, Furaha dahsoon iyo waxa furmay ayaa ah, sida lagu sheegay hordhaca Micaela Vázquez Lachaga, turjumaanka shaqada, “isku-darka maaddooyinka oo shaki la’aan rafcaan u noqon doona akhriste kasta oo ku raaxeysta qarsoodiga qarnigii sagaalaad iyo sheekooyinka jaceylka, iyo sidoo kale qof kasta oo qiimeeya shaqada suugaanta ee Louisa May Alcott oo doonaya inuu ogaado dhinaceeda gothic iyo xiisaha badan ”.
Qore: Anne Brontë
Waxaa tarjumay: Menchu ​​Gutiérrez
Sidee ayay u fiicnaan lahayd in la noqdo maamule! Dunida u bax ... kasbashada masruuftayda ... Bar dhalinyarada inay qaangaadhaan! " Tani waa riyadii gabadh wadaad ah oo suubban, oo ah mid ku habboon madaxbannaanida dhaqaale iyo mid shaqsiyeed, iyo u heellanaanta hawl sharaf leh sida waxbarashada. Markay rumowdo, si kastaba ha ahaatee, jilayaasha riyadan ku jira waxay isu muujinayaan sida bahallada qarowga ah: carruurta arxan -darrada ah, gabdhaha dhallinta ah ee dhagar -qabayaasha ah, aabbayaasha qallafsan, hooyooyinka macallimiinta ah iyo kuwa dulqaadka leh ... ka badan sida addoon.
Agnes Gray (1847), sheekadii ugu horreysay ee Anne Brontë, waa muujinta oomane ah oo ku saleysan waaya -aragnimada taariikh nololeed ee xaaladda aan sugnayn, maaddiga iyo anshaxa, ee maamulka Victoria; isla markaana ka dhigaysa sheeko qarsoodi ah, ku dhawaad ​​qarsoodi ah oo jacayl iyo bahdilaad ah, taas oo "is -dirka ugu daran" iyo "is -nuglaanta ugu daran" ay ku qaadaan dagaal layaab leh waxa ay halyeeyga lafteedu ku qeexday "midabka madow ee dunida hoose. , dunidayda gaarka ah ”.
Qore: Flora Thompson
Waxaa tarjumay: Pablo González-Nuevo
Daabacaha: Warqadda Tin
“Galab diiran oo September ah dabayaaqadii qarnigii sagaal iyo tobnaad, ayay gabadh ka soo gudubtay xadka Hampshire iyada oo ku sii jeeday Heatherley. Waxay xirtay dhar dhogor bunni ah iyo koofiyad dhogorta beaver ah oo lagu xardhay laba baal oo gorayo ah. Dharkii ugu dambeeyay ee dalka. »
Gabadhaasi waa Flora Thompson, Laura oo khayaali ah, iyo magaalada ay u socoto, Grayshott, halkaas oo Flora ay degtay 1898 iyadoo ahayd maareeyaha xafiiska boostada. Dambiilaha Hertford, loo -shaqeeyayaasheeda, ayaa ku sugaya halkaas; Macaamiisha sida sharafta leh sida Arthur Conan Doyle ama Georges Bernard Shaw, adeegsadayaasha joogtada ah ee telegraafka deegaanka; ama Madame Lillywhite ee xaraashka xodxodashada ("warshad -gacmeedyada, dawaarka, iyo amaahda buugga"), halkaas oo Laura ay marmar awooddo akhrinta cusub.
Xilligii baaskiilka is -hoosaysiiya, sawirradii Kodak ee ugu horreeyay iyo cabsida naxdinta leh, Heatherley waa cutub cusub oo nolosha Laura ah oo xasilloon oo madax bannaan, jiir yar oo waddan ah - sida saaxiibbadeedda casriga ahi ugu yeeraan fin de siècle - oo deegaankeeda dabiiciga ah had iyo jeer wuxuu ahaa kaymaha iyo dabeecadda duurjoogta ah ee aan la kulannay markii ugu horreysay cajiibkeeda Candleford Trilogy.
Qore: Anne Hébert
Waxaa tarjumay: Luisa Lucuix Venegas
Los alcatraces ayaa tarjumaysa adduunyo arxan-darro ah oo qaawan oo ah bulsho yar oo Ingiriisiga ku hadasha, oo ay jajabisay mawjad katoolik oo ku hadasha afka Faransiiska. Abaalmarinta Femina 1982, sheekadan waxay ka dhigan tahay dib ula midoobidda masiibo dilaa ah oo lagu calaamadeeyay dembi iyo bahalnimo. Casuumad ku wajahan Hébert's kakan iyo gabayada gabayada.
Bishii Ogosto 31, 1936, laba dhalinyaro ah, Olivia iyo Nora Atkins, way baaba'aan gudaha Griffin Creek, oo ah magaalo Kanadiyaan ah oo mugdigu u muuqdo mid joogto ah. Waxaa loogu hinaasay quruxdooda, raadkoodu wuxuu ku lumay xeeb duurjoog ah. Sawirka gabdhuhu wuxuu ku dhex milmaa muuqaalka badda, dabayshuna waxay beertaa jawi xun, oo ku habboon mala -awaalka, kaas oo raadadka xaaraanta iyo garaadka xun garaacayaan. Waxaa durbadiiba meesha laga saaray in maqnaanshihiisu uu yahay mid ku yimid fursad: nasiibdarro ayaa soo jiitamaysay muddo dheer. Iyada oo la adeegsanayo codadka jilayaasha, iyo sidoo kale xarfaha qaarkood, waxaan markhaati ka nahay geedi socod aan la joojin karin kaas oo masiibadu si ba'an u xanaajineyso bulshada, barafka ku xanniban iyo dhaqan diimeedka oo sii xumaaday. Waana in masiirka magaalada yar ee Quebec uu u muuqdo mid aan laga soo kaban karin oo ku hoos jira naqshadaha Ilaah.
Noocyadan cusub ee suugaanta keebaa aad jeceshahay inaad akhrido? Miyay kugu dhacdaa aniga oo kale inaad dhammaantood jeceshahay? Xusuusnow in bil kasta Bezzia aan kula wadaagno qaar ka mid ah wararka suugaanta oo bishii hore aan u hibeynay ka shaqeeya kalinimada. Haddii aad xiisaynayso mawduuca, iska hubi!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Warka suugaanta ee ku geeya waagii kale